Soo dejisan OneNote 15.1.6319.4426 – Vessoft
AndroidXafiiskaQoraalada iyo JadwalkaOneNote
Bogga rasmiga ah: OneNote
OneNote – buug qaab digital. Software waxaa loogu talagalay si ay u abuuraan liiska, Gunaanadka, qoraalada u habaynayo ama xafididda. OneNote u saamaxaaya in ay waafajinta xogta la aaladaha kale ee ku saabsan codsiga la geliyo. Software wuxuu kuu ogol yahay in qaab qoraalada, abaabulo isticmaalaya buugaagta, qaybaha iyo tags. OneNote u saamaxaaya in ay ku darto sawir, cod, ama video ka files si qoraal ah oo iyaga la wadaag saaxiibadaada.
Abuuridda haboon ee liiska, koobid iyo qoraalada
.Wadashaqayntaas Data u dhexeeya qalabka kala duwan
Search by keywords ama weedho
Awoodda in ay wadaagaan qoraalada la saaxiibo
Soo dejisan OneNote
Faallo ku saabsan OneNote
OneNote Xirfadaha la xiriira